`မြေမြိုလို့ လူမျိုး မပျောက်ဘူး….လူမြို မှ လူမျိုးပျောက်တယ်´ – ဒီစကားကို…တရုတ်ကြီးရှုမောင်က ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး…နံရံပေါ်တင်လာတာဗျ| Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Home`မြေမြိုလို့ လူမျိုး မပျောက်ဘူး….လူမြို မှ လူမျိုးပျောက်တယ်´ – ဒီစကားကို…တရုတ်ကြီးရှုမောင်က ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး…နံရံပေါ်တင်လာတာဗျ
`မြေမြိုလို့ လူမျိုး မပျောက်ဘူး….လူမြို မှ လူမျိုးပျောက်တယ်´ – ဒီစကားကို…တရုတ်ကြီးရှုမောင်က ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး…နံရံပေါ်တင်လာတာဗျ
April 12, 2017 drkokogyi
ကိုယ်ရေးရတဲ့စာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်…မနှစ်မြို့ ပါဘူး…..
သစ္စာတရား လက်ကိုင်ထားသူတွေကို ထိခိုက်စေလိုတဲ့စေတနာ မပါပေမဲ့
ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေအရရေးလိုက်ရတာကို နားလည်မှုနဲ့ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်…….
“မြေမြိုလို့ လူမျိုး မပျောက်ဘူး….လူမြို မှ လူမျိုးပျောက်တယ်´´
ဒီစကားကို…တရုတ်ကြီးရှုမောင်က ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး…နံရံပေါ်တင်လာတာဗျ….
ဘယ်သူတွေက မြိုနေတယ်…ဘယ်လိုမြိုနေတယ်ဆိုတာ…နဲနဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်…….
တရုတ်လူမျိုး တွေ…….
သူတို့ကိုယ်သူတို့…ဗုဒ္ဂဘာသာပါလို့ ကြေငြာလိုက်တယ်….အားလုံး…ဗမာနဲ့ တသားထဲဖြစ်သွားတယ်……
စီးပွားရေး…လူမှုရေး…နိုင်ငံရေး..ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ တရုတ်တွေ ထဲထဲဝင်ဝင် ချု ပ်ကိုင်ထားကြပြီ….
လက်ရှိ…DASSK ဦးဆောင်တဲ့ ဦးထင်ကျော် အစိုးရထဲမှာလဲ…တရုတ်အနွယ်ဝင်
တွေ နေရာယူထားကြမှာ..အသေအချာပါ….
တနေ့ကတောင်…ခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်…တရုတ်လူမျိုးကို မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ခန့်လိုက်သေးတယ်…
တရုတ်ဟာ…ဘယ်လိုဗုဒ္ဂဘာသာပါလို့ပြောပြော…..သူတို့ မျိုး ရိုးစဉ်ဆက် ကိုးကွယ်လာတဲ့ ကိုးကွယ်မှုကို လက်မလွှတ်နိုင်ကြပါဘူး….
အဲ့ဒီတော့…လူမြိုပြီး…တိုင်းပြည်မြိုပြီး….ဘုရားပါ မြိုဖို့ ကြိုးစားလာကြတာ….. အထိုက်အလျှောက်တော့ အောင်မြင်နေပါပြီ…..
တရုတ်လူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော်ဆိုရင်…ဓမ္မာရုံတိုင်း…. ဘုရား ပုထိုးစေတီတိုင်းလိုလိုမှာ…မြတ်စွာဘုရားနဲ့ တတန်းထဲ နေရာယူထားတာ… ကြာ ပါပြီ……
မေမြို့ က တရုတ် ငါးပါးသီလကျောင်းမှာ…ကျွန်တော်တို့ တသက်လုံးက သိခဲ့တဲ့
ဥတိဘွား ရုပ်ထုကြီးမှာ…`နောက်ပွင့်မည့် အရိမ္မေတ္တရ အလောင်းတော်´ လို့
တလောဆီကတင်…စေတီတဆူမှာ….ခြင်္သေ့ နေရာမှာ…တရုတ်ဖားရုပ်တွေ… တရုတ်တိုးနယားအရုပ်တွေထုထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း…ဖတ်လိုက်ရသေး
သိပ်မကြာခင်…အကျွတ်အလွတ်ပွဲတွေနဲ့ အတူ…တရုတ် တစ္ဆေကြီးလဲ…. မြန်မာ့ အခန်းအနားတွေမှာ…သက်ဝင် လှုတ်ရှားလာပါလိမ့်မယ်…..
ဟိန္ဒူ တွေကတော့ ရှင်းပါတယ်….မြတ်စွာဘုရားက ..သူတို့ ဘာသာရေးအရ… နတ်ဘုရားတပါးအဖြစ်ရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့…မူလက မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ် လေ့ မရှိပေမဲ့…….လက်ရှိခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ…..သူတို့ ဘုရားစင်ပေါ် မှာ…..ကျန်တဲ့ဘုရားတွေနဲ့ ကြမ်းတပြေးထဲ တင်ထားလိုက်ပြီး….ဗုဒ္ဂဘာသာ ဟိန္ဒူ
မွတ်တွေကတော့ ရောလို့ နှောလို့ မရတော့…..ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်…
ဒါပေမဲ့…လူလယ်ကျတဲ့သူတွေကတော့ …မြိုပုံမြိုနည်းက သူများထက်သာအောင် တွေ့ရတယ်ဗျ…..
ပြသနာအရှာခံနေရတဲ့ သာသနာထဲက ထွက်လိုက်တာပေါ့ဗျာ….သူ့ကိုယ်သူ
ဗုဒ္ဂဘာသာလုပ်လိုက်တယ်….ပိုကဲပြီး သင်္ဃန်းပါ ဆီးလိုက်တယ်ဗျာ……
အနေချောင်သလား…အစားချောင် သလားတော့မမေးနဲ့…..လားရှိုးမှာ မဘသ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး…..ဗုဒ္ဂသာသနာတော် သိက္ခာကျအောင်…ရည်ရွယ်
ချက်ဆိုးဆိုးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေနှိုင်တယ်…အမုန်းစကားပြောတာတွေ…ရန်စကားဖြန့်ဝေတာတွေတောင် လုပ်နေနိုင်သေးတယ်….
သူ့လုပ်ရပ်…သူ့အမူအကျင့်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင်….မူလ သူ့ မိရိုးဖလာ…. အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်သိမှုမရှိသလို….လက်ရှိ သူခံယူ ယုံကြည်
ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဂသာသနာတော်အပေါ်မှာလဲ သစ္စာစောင့်သိမှု မရှိဘူး
မြတ်စွာဘုရားဟောကြား ဆုံးမ သွန်သင်ခဲ့တဲ့ တရားဒေသနာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်…
ရဟန်းတပါးစောင့်ထိန်းရမဲ့ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကို မစောင့်ထိန်းဘဲ…..ဗုဒ္ဂ ဘာသာဝင်တွေကို…အမုန်းတရားတွေကိန်းအောင်းလာအောင်…လူအချင်းချင်း သတ်ချင်ဖြတ်ချင် စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်…သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာအောင်…
လားရှိုးက အင်္ဂုရ ဆိုတဲ့ မွတ်စလင်ပျက်ဘုန်းကြီး…ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ
သူတကိုယ်ရေ ကောင်းစားရေး…အနေချောင်ရေး…အစားချောင်ရေးအတွက်…
ဘာဘဲလုပ်ရ..လုပ်ရ ဆိုတဲ့လူ အမျိုးအစားတွေပါ…..
နောက်ထပ် ထင်ရှားတဲ့ အက်စီးဒဲန့် ကိုယ်တော်ကြီးကလဲ မွတ်ပျက်ဘဲလို့ သိရပါတယ်…သူ့ ညီအရင်းတယောက်ဟာ…အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ…မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ သတင်ကြားလို့…ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားလေးတွေ ကြိုးစားရှာဖွေနေပါတယ်……
စစ်မှန်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကတော့….လူလဲမမြိုကြပါဘူး….ဘုရားကိုလဲ မြိုလို့မရနိုင်ပါဘူး…ထင်သာမြင်သာနဲ့ သိသိသာသာ ကွဲကွဲပြားပြားဘဲ နေလို့ရပါတယ်….
ဗုဒ္ဒဘာသာတွေ…ဗမာတွေကို ပူးသတ်မဲ့ လူမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး……
စော်ကားလိုတဲ့ သဘော နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်လိုတဲ့သဘော…….သက်သက် ဆိုရင်တော့(ကျွန်တော်တဦးထဲ သဘောအရတော့)…တူညီတဲ့တုန့်ပြန်မှုနဲ့ရှင်းမှဘဲ ရလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်…..
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ…ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့အတူ….လူမှုရေး…ယဉ်ကျေးမှု… ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ…တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး…ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ…တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ…စီးပွားရေးတွေမှာ…တသားထဲ
နေလို့ရပေမဲ့ …ဘာသာရေးကို ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီး…ပူးသတ်လို့မရပါဘူး…မြိုလို့မရပါဘူး….
ပူးသတ်လို့မရ …မြိုလို့မရ…ဟန်ဆောင် ကိုးကွယ်ပြလို့ မရတဲ့အတွက် …အမျိုးဘာသာသာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေသူများက …သိသာစွာ စောင့်
အဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘဲ…မိမိကိုယ်မိမိ ဗုဒ္ဒဘာသာပါလို့လုပ်ပြီး…လူမျိုးရော…သာသနာကိုပါ မြိုမဲ့သူတွေကို အဓိကထား စောင့်ကြည့်ရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိကိုဘဲ…ဗေဒင်ကျမ်းစောင့်တဲ့နတ်သမီးက ပိဋကတ် ၃ပုံစောင့်တဲ့နတ်သမီး ဖြစ်….ဥတီဘွားက ဘုရားအလောင်းဖြစ်….ကွမ်ရင်မယ်တော်က ဘုရားနဲ့ တဂိုဏ်းထဲဖြစ်……
စဉ်းစား ချင့်ချိန်ကြပါဦးဗျာ…..
← When former President U Thein Sein and Sr General Min Aung Hlaing trying to cover-up their massacre of about 500 Myanmar Muslims in Meiktila by shamelessly announced that only2persons died, U Win Htein bravely told the Singapore Newspaper that in just one morning he saw at least 40 dead bodies
“အွမ္မသ်စုစည်းဖို့ ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုတာ…” →